Brezila: Ataon’ny mpiserasera fialam-boly ny famelezana ireo politisiana mpanolikoly · Global Voices teny Malagasy
Brezila: Ataon'ny mpiserasera fialam-boly ny famelezana ireo politisiana mpanolikoly
Voadika ny 20 Jona 2018 4:45 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, bahasa Indonesia, Español, English
(Marihana fa efa tamin'ny volana Janoary 2010 ny lahatsoratra teny Anglisy)
Rehefa nahita ny tenany lasibatry ny famotoran'ny polisy federaly amin'ny maha- mpitarika ny tambajotra kolikoly farany manafintohina an'i Brezila, azon'ny mpiserasera tifirina amin'ny lalao video an-tserasera ankehitriny i José Arruda, governora ao amin'ny Distrika Federaly. Natomboky ny Movimento Brasília Limpa [Diovy ny Hetsika Brasília, pt], manasongadina an'i Arruda sy panettone (mofomamy Krismasy malaza teo aloha, saingy ankehitriny mariky ny ady amin'ny kolikoly ao amin'ny firenena) manidina amin'ny rivotra ny lalao. Manazava ny fomba filalaovana i Paola Lima:
O passatempo é simples – e feito em cima do que se tornou o símbolo da crise, o panetone. O jogador tem de destruir os quitutes natalinos que aparecem na tela, assim como os bonequinhos do governador José Roberto Arruda. Ao fim do jogo, a mensagem: “Você ajudou a limpar Brasília”.
Tsotra ny lalao ary mifototra amin'izay hita fa mariky ny krizy, mofomamy. Ny mpilalao dia tsy maintsy mamotika ireo hanim-py Krismasy izay miseho eo amin'ny efijery, miaraka amin'ny sarin'ny governora José Roberto Arruda. Amin'ny fiafaran'ny lalao, miseho ny hafatra hoe “Nanampy nanadio an'i Brasília” ianao.
Movimento Brasília Limpa
Mofomamin'i Arruda. Domy ny mpanao politika mpanao kolikoly mba hanadio an'i Brasília. Isa 1 ny Panetone, isa 5 i Arruda. Manohana ny hetsika “Diovy Brasília” isika.
Ny hetsika tamin'ny Novambra 2009 no aingam-panahin'ny lalao, raha niampanga an'i Arruda ho misahana sendikà mifototra amin'ny risoriso sy kolikoly miraikitra sy mavitrika izay voalaza fa nizara vola isam-bolana 600.000 dolara R (eo ho eo amin'ny 340.000 dolara eo) ho an'ny mpiara-dia aminy ny polisy federaly. Tratra tamin'ny kamerà ny asa ratsiny ary niparitaka nanerana ny firenena tamin'ny alalan'ny YouTube. Nandà ny fiampangana rehetra i Arruda ary nilaza fa nomena mba hividianana mofomamy ho an'ny mahantra ny vola.
Mazava ho azy fa vao mainka nanampy trotraka ny tantara ratsy ity fialan-tsiny ity ary niteraka vazivazy maro; Na dia ny ankizy aza dia naneso sy nangataka ny fanesorana an'i Arruda ao amin'ny governemanta. Maro ireo hira, sarimiaina sy horonan-tsarimihetsika navoaka tao amin'ny Youtube, izay samy nampiasa lahatsary azon'ny rehetra ampiasaina mba hamerenana ilay tantara, ary nofenoina vazivazy marobe. Toa mampiasa vazivazy sy aterineto ny Breziliana mba hahazoana antoka fa tsy manadino ity tranga ity ny vahoaka – malaza amin'ny mora fanadinoany rehefa politika.
Ao anatin'ity andiana horonan-tsary ity (amin'ny teny paortiogey) mamerina ny sehatra mifototra amin'ny sarin'ny Governora sy ny mpiara-dia aminy miaraka amin'ny vola ao anatin'ny atin'akanjo, ba kiraro sy lobaka, manolo ny mofomamy ho vola.
Namorona hira funk anankiroa i MC Paulada (samy amin'ny teny Portiogey) mba hankalaza ny tantara ratsy “Boatin'i Pandora”.
MC Paulada/You Tube
Ao amin'ny “Arruda Out! Pandora's Box Funk” (etsy ambony), ny lahatsary dia manomboka amin'ny feo milaza hoe, “Eny, andeha isaina ny tombony. Tsia, tonga ny polisy federaly! Vita isika, inona no azontsika atao? Atsofohy ao anatin'ny atin'akanjonareo, tsia, ny bà kiraronao … tsia, ny atin'akanjonareo ny vola! Tsy misy dikany izany, andao andeha, andao andeha !!! “
Ao amin'ny “Arruda sy ny tahotry ny vola nafenina”, nanisy feo i MC Paulada: “Aiza ny volantsika? Miafina ao anatin'ny bà kirarontsika, ny akanjo sy ny atin'akanjo sy ny kitapo izy rehetra.”
Hiverina ny fanadihadiana ataon'ny polisy momba ny “Pandora's Box” aorian'ny Krismasy sy Taom-baovao, raha hanangana Vaomiera Parlemantera Mpanadihady(CPI ) ny Fitsarana Tampony sy ny Efitra Federaly mba hanadihady ny raharaha. Raha toa ka tsy misafidy fomba fiasa mahomby kokoa amin'ny fanadihadiana ry zareo, dia hampihena ny fahafahana miampanga an'i Arruda ny fihisaran'ny fanjakam-birao ary afaka mamarana ny fe-potoam-piasany alohan'ny fifidianana manaraka, amin'ny oktobra 2010 i Arruda.
Tsy ny “Mofomamin'i Arruda” no lalao an-tserasera voalohany mampiseho mpanao politika Breziliana voampanga amin'ny fanao ratsy isan-karazany. Lasibatra ihany koa ny filohan'ny Antenimieran-doholona, ​​José Sarney, voampanga tamin'ny kiantranoantrano tamin'ny volana Jolay. Ny tanjon'ity lalao manaraka ity dia ny hitifitra ny lohan'i Sarney amin'ny tifitra baolina no sady voahodidin'ireo mpanao lalàna hafa izy. Fialam-boly tanteraka izany, ary afaka miasa amin'ny fombanao amin'ny ambaratonga samihafa ianao. Noforonin'ny tranonkala Parece Piada ny lalao. Tsindrio eto ambany raha hilalao:
Kapohy i Sarney! Anjaranao no mandamina ny Kongresy!
Efa tamin'ny taona 1990 ny fomba fanao, raha lasibatra ny filoha Breziliana teo aloha Fernando Collor de Mello, izay voaongana tamin'ny taona 1992. Araka ny filazan'i Futepoca [pt], ny Collor no lalao voalohany tahaka izany:
O primeiro escândalo de corrupção a ganhar as telas de vídeogames e computadores foi o que envolvia o então presidente Fernando Collor de Mello. Com o nome “Roxo”, o objetivo do passatempo era acertar a figura de um caricato mandatário – com faixa presidencial a tira-colo – com um martelo. Ao garantir o sucesso da empreitada, o pequeno Collor no joguinho, seu membro ganhava a cor roxa e surgia um balãozinho com o dizer: “Ui!”. Tudo em alusão à declaração do próprio alvo da piada, ainda em campanha eleitoral, de que ele teria “aquilo roxo”.
Nampiseho ny filoha teo aloha Fernando Collor de Mello ny tantara ratsy voalohany momba ny kolikoly ankafizina amin'ny lalao sy ny efijerin'ny solosaina. Ny tanjon'ny lalao, antsoina hoe “Volomparasy,” dia ny hampiasa famaky hamelezana ny tava mampihomehy an'izay mpanao politika manao samboadin'ny filoham-pirenena. Raha mahomby, lasa volomparasy ny filahian'ny Collor ary mipoitra milaza hoe “U” ny teny kely anaty boribory. Milaza ny fanamarihana natao nandritra ny fampieleza-kevi-pifidianana tamin'ny vazivazy ny lalao, izay milaza fa “volomparasy ny zavany” [midika fa mahery fo, matanjaka, tsy matahotra, tena lehilahy” izy].
Shily 15 ora izay
Però 6 andro izay